काठमाडौं।सिभिल बैंकले नेपालमै पहिलो पटक एन्यूटी डिपोजिट निक्षेप योजना ल्याएको छ।बैंकका अनुसार यो बचत र मुद्दतीको समायोजन गरी बनाईएको निक्षेप योजना हो। एन्यूटी डिपोजिट योजना भनेको भविष्यमा आफूलाई चाहिने रकमको व्यवस्थापन..
एनएमबी बैंकको सिफारिसमा नेपाली नागरिकलाई जापानमा जागिर र ऋण पाइने
काठमाडौं। एनएमबि बैंकले जापान र नेपालमा रहने नेपाली समुदायको बैंकिङ आवश्यकतालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले जापानको दाइ–इची कङ्ग्यो क्रेडिट कोअपरेटिभ (डीकेसी) सँग सहमति गरेको छ। केडिसीले एनएमबिको सिफारिसमा नेपाली नागरीकहरुलाई जापानमा रोजगारी..
आरएसडिसी लघुवित्तको १६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । आरएसडिसी लघुवित्तको गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट शेयरधनीहरुलाई कूल १६ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। लघुवित्त सञ्चालक समितिको बैठकले ६ प्रतिशत बोनस र बोनसमा लाग्ने कर प्रयोजन सहित १०..
कनेक्ट आइपिएस इ-पेमेन्टबाट पैसा ट्रान्सफर गर्दा अब शुल्क तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं। नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले कनेक्ट आइपिएस इ-पेमेन्ट प्रणाली प्रयोग गर्ने पैसा तिर्नु नपर्ने भएको छ। कम्पनीले निःशुक्ल फण्ड ट्रान्सफरको सुविधा सुरु गरेको छ। सीमित अवधिका लागि सुरु गरिएको..
पीओएसमार्फत भुक्तानी गर्दा अब सेवा शुल्क नलाग्ने
काठमाडौं । प्वाइन्ट अफ सेल्स (पीओएस) मार्फत भुक्तानी गर्दा अब सेवा शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ । होटल रेस्टुरेन्ट, सपिङ्ग सेन्टरलगायतले पस मेसिनबाट हुने भुक्तानीमा सेवा शुल्क लिँदै आएकोमा राष्ट्र बैंकले..
काठमाडौं । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स (नेप्स) ले केही बैंकका एटीएम मेसिनबाट अनाधिकृत रुपमा रकम निकालिएको सन्दर्भमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेप्सले एक विज्ञप्तिमार्फत कम्पनीका सदस्य बैंकहरु, सूचना..
सानिमा बैंकले २१ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा
काठमाडौं । सानिमा बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई प्रतिशत २१.०५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको भदौ १६ गते सम्पन्न बैठकले १० प्रतिशत बोनस र बोनसमा..
काठमाडौं । चिनियाँ ह्याकरले एटिएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालका पाँच बैंकबाट तीन करोड ४४ लाख झिकेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भारतीय एसबिआई बैंकको एटिएमबाट एक करोड ७६ लाख तथा नेपाली..
काठमाडौं । नेपाली बैंकको एटिएम बुथको स्विच ह्याक गरी चोरी गर्ने गिरोह पक्राउ परेसँगै नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले चासो व्यक्त गरेको छ। पाँच चिनियाँ नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि चिनियाँ दूतावासका कर्मचारी..
एटीएम ह्याकिङ प्रकरणमा ३ जना नेपाली पक्राउ
काठमाडौं । नेपालका बैंकहरुको एटीएम ह्याक गरी रकम झिक्ने चिनियाँ नागरिकले पैसा साट्न प्रयोग गरेको दुई मनी एक्सचेन्जका सञ्चालक पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ..
बैंक अफ काठमाण्डूको १७ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौँ । बैंक अफ काठमाण्डूले गत आर्थिक वर्ष २०७५|०७६ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई गरि १७ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ। सञ्चालक समितिको भदौ १५ गते सम्पन्न १३० औं बैठकले ६ प्रतिशत बोनस..
Posted on Sep 01 2019
काठमाडौं । चिनियाँ ह्याकरहरुले ५ वटा नेपाली बैंकको डाटा ह्याक गरेर ५ घन्टामै ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ चोरेका छन् । शुक्रबार मात्रै चीनबाट काठमाडौं आएका ह्याकरहरुले शनिबार दरबारमार्ग र..
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीका अनुसार शनिबार अपरान्ह चार बजे उनलाई प्रभु बैंकका अप्रेसन अफिसरले फोन गरे, ‘दरबारमार्गमा रहेको नबिल बैंकको एटिएम बुथमा मानिसहरुको अस्वभाविक चहलपहल..
काठमाडौं । शनिबार राति विभिन्न बैंकको एटिएमबाट ह्याकरले पैसा निकालेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारण आतंकित भएका छन्। कतै आफ्नो खाताबाट पनि रकम हराएको त छैन भन्ने डर सर्वसाधारणमा छ। तर, राष्ट्र..
काठमाडौं । एकै रातमा काठमाडौंका विभिन्न एटिएम बुथबाट अर्बौं रकम झिक्ने चिनियाँ नागरिकको योजना प्रहरीले असफल पारेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पाँच जना चिनियाँ ह्याकरको समूहलाई शनिबार..
काठमाडौं । चिनियाँ ह्याकरहरुले नेपाली बैंकहरुको प्रणाली ह्याक गरी ग्राहकको गोप्य नम्बर प्रयोग गरेर एटिएम मसिनबाट ठूलो रकम निकालेका छन् । यसमा संलग्न पाँच चिनियाँ पक्राउ परेका छन् भने प्रहरीले..
काठमाडौं । नबिल बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नाफा ८ प्रतिशतले बढाएको हो । बैंकले प्रकाशित गरेको विवरण..
काठमाडौं । एनएमबि बैंकको साउन २८ गते मंगलबार सम्पन्न विशेष साधारण सभाले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जर गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । विशेष साधारण सभाले ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँग गरिएको मर्जर सम्झौताको..
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्घित नेपालक्लियरिङ्ग हाउसले संचालनमा ल्याएको कनेक्ट आइपिएस प्रणालीमा कारोबार गर्ने बैंकहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जोडिएको छ। योसँगै बैंकका ग्राहकहरुले पनि अब यस..
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैकले आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै साउन २६ गते आइतबारदेखि बैंकको कान्तिपथस्थित शाखाबाट दैनिक १२ घण्टा सेवा सुचारु गरेको छ । आइतबारदेखि बैंकको कान्तिपथ शाखा बिहान ८..
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्घित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले संचालनमा ल्याएको कनेक्ट आईपीएस ई–पेमेन्ट प्रणालीमा कारोबार गर्ने बैंकहरुमा कृषि विकास बैंकलाई पनि उक्त प्रणालीमा आवद्ध गराई..
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले तीनवटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले धनकुटा जिल्लाको धनकुटा नगरपालिका वडा नं १, हिले बजार, सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं ..
काठमाडौं। राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनको बिरुद्ध हम्मेसी सार्बजनिक टिकाटिप्पणी नगर्ने बैंकर्स संघले बुधबार प्रेस वक्तब्य जारी गरेको छ। केही बर्षअघि मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बैंकर्स संघको अध्यक्षका रुपमा राजनसिंह भण्डारीले पत्रकार..
किन नियुक्त भएको साता दिन नपुग्दै गयो प्राइम बैंकका सिइओको जागिर
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनपछि प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नारायणदास मानन्धरको पद गुमेको छ। राष्ट्र बैंकले सिइओका लागि उमेर हद तोकेसँगै उनको पद गुमेको हो। ७४ वर्षीय..
कृषि विकास बैंकको ४ अर्ब ३५ करोड खुद नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी ४४ रुपैयाँ
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले गत आर्थिक बर्ष ४ अर्ब ३५ करोड खुद नाफा गरेको छ । आर्थिक बर्ष ७४/७५ मा बैंकले ३ अर्ब ६५ करोड खुद नाफा गरेकोमा गत..
राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा के के छन् नयाँ व्यवस्था ? पूर्ण पाठ सहित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनवटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि यसअघि जारी गरेकोे एकीकृत निर्देशन २०७५ मा भएको विभिन्न व्यवस्थाहरुमा परिमार्जन, संसोधन र नयाँ व्यवस्था गरेको छ। सोमबार संसोधन..
एचएसबीसी बैंकले चार हजार रोजगारीका अवसर कटौती गर्ने, संकटबाट जोगिएला ?
लण्डन। बेलायती बैंक एचएसबीसीले चार हजार रोजगारीका अवसरलाई कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। एचएसबीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन फ्लिन्टले बैंकलाई नयाँ आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन बैंकले आफ्नो सेवाका लागि उपलब्ध गराउँदै आएका..
कुमारी बैंकको नाफा २८ प्रतिशतले बढ्यो, कमायो १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नाफा
काठमाडौं । कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो अवधिमा बैंकको नाफा २८.०४ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ३३ करोड ४० लाख..
सहकारी संस्थाले १६ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिएमा कार्वाही, स्प्रेड रेट ६ प्रतिशत
काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदरको सीमा तोकेको छ । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारी संस्थाहरुको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर तोकेको हो । अब सहकारी संस्थाहरुले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी..
एभरेष्ट बैंकको एक बर्षमा ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा
काठमाडौं। विदेशी संयुक्त लगानीको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक बर्ष खुद नाफा १८ प्रतिशतले बढाएको छ। बैंकले एक बर्षमा ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको हो। अघिल्लो बर्ष..
Results 1896: You are at page3of 64